Rooble oo kulankii u danbeeyay la qaatay guddiga ku sugan The Hague | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo kulankii u danbeeyay la qaatay guddiga ku sugan The Hague
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa aaladda fogaan-aragga ZOOM, kulan kula qaatay wafdiga Soomaaliya u jooga magaalada Hague ee ka qeyb galaya ku dhaaqista go'aanka maxkamada ICJ.
MUQDISHO, Soomaaliya - Go'aanka Maxkamada oo dhacaya maalinta berito ah ayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa uu wafdiga Soomaaliya ee ku sugan The Hague ku booriyey ka qeyb ahaanshaha fadhiga Maxkamadda, isagoo kula taliyey u hoggaansanaanta go'aan kasta oo ka so baxa ICJ ee la xiriira dacwada badda ee Soomaaliya iyo kenya.
Ra'iisul Wasaare Rooble, ayaa intii uu kulanku socday rajo weyn ka muujiyey in guushu ay raaci doonto Soomaaliya, waxana uu hoosta ka xariiqay in ay lagama maarmaan tahay in lala yimaado isku duubni, si ay filashadasi u mira dhasho.
Wafdiga uu RW Rooble aaladda fogaan-aragga kula hadlay ayaa waxaa hoggaaminaya Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, waxana maalintii shalay ay gaareen Magaalada Hague
Dowlada kenya ayaa kal hore ku dhawaaqday in aysan aqbaleynin go'aan kasta oo ka soo baxa Maxkmadda Cadaaladda Aduuunka ee ICJ oo la xiriira dacwada badda, iyadoo taasina ku sababeysay in maxkamaddu aysan dhex dhexaad ka noqon dacwada muran biyoodka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Marin biyoodka la isku hayo oo badkiisu yahay Boqol Kun oo mitir oo isku wareeg ah "square" ayaa qani ku ah shidaalka, waxana go'aanka maxkamadda uu soo da-dejin doonaa, in dhowr shirkadood oo heshiis kula jiray Dowladda Kenya, ay dib u laqaan damacoodii ku aaddana in ay shidaal ka qodaan badda Soomaaliya.